Ukulungele Ukunciphisa Ukumaketha Kwakho Kwe-Instagram? | Martech Zone
Ngizoba owokuqala ukuvuma ukuthi angibeki isikhathi esiningi kuVine, ku-Instagram futhi ngabelana ngezithombe ezinkundleni zokuxhumana. Ngiyafuna, kepha kulula kakhulu ukunikeza ithiphu ngombhalo kunokubamba isithombe, ukuklama okuthile, bese wabelana ngokuthile okunengqondo, kepha kunakwa ithoni. Ngiyaqeda ukuthatha izithombe nevidiyo yenja yami uGambino esikhundleni salokho… abalandeli bami bayabathanda labo!
Ngithemba ukuguqula lokho kulo nyaka. Ngifuna ukugxila kumasu ethu futhi ngiwaqondanise kuzo zonke iziteshi zethu zemidiya kangcono kakhulu. Noma ngabe kumane kusetshenziswa ikhamera yami ukuthatha isithombe sesithombe esifakiwe seposi lebhulogi engilabayo, ngiyaqiniseka ukuthi lingafinyelelwa kakhulu kune-selfie… noma i-doggie. Futhi kuhambisana kakhulu nomkhiqizo wethu nokuqukethwe esikwenza umsebenzi omuhle kangaka ngakho. Amathiphu akule infographic azosiza!
Abathengi banamuhla basebenza ngombani wokunaka okusheshayo kwesinye isikhathi ngisho ne-Facebook engakwazi ukuhambisana nakho. Yingakho i-Instagram inyuka ngokuthandwa. Lokho abaningi abake bakucabanga esikhathini esidlule njengendawo yokwabelana ngezithombe kuphela, manje sekuyithuluzi elikhulu lokumaketha ezokuxhum elingadala imiphumela yangempela yomkhiqizo wakho. U-Issa Asad
Ehambisana ne-infographic, u-Issa Asad unikeza i-ebook ephelele Inzuzo esheshayo nge-Instagram ingalandwa manje mahhala.
Tags: ukumaketha isithombeinstagramukumaketha kwe-instagramU-Issa Asadukumaketha okubukwayoI-Wyzowl
I-Digital Marketing ne-SEO yamaBhendi nabaculi
Ukuqonda Ukuthi Ukukhokha Ngokuchofoza Kusiza Kanjani Ukucinga Kwakho Okungokwemvelo
Phuma ngaphambili nesikhungo (@EXITFrontCenter)
Jan 21, 2015 ngo-2: 50 PM
Ngiyabonga, uDouglas nge-infographic enhle. Nami angikathumeli enkampanini yethu ye-Instagram indawo engifanele futhi lokhu kufanele kusize ukungigxuma.